Puntland-Garowe City: ‘Oo Kaalinta Labaad Ka Gashey Ciyaaraha Bariga iyo Bartamaha Africa Inter-Cities’ | http://kismaayodaily.com
Waxaa jira dad badan oo nadhaamka Federaalismka u arka in uu yahay mid dhaawacaaya diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Waxaase la yaableh in dadkaasi aysan ka warqabin in Dowladaha Aduunka kuwa ugu tayo iyo tabar badani: America, Canada iyo Germany oo ay ku nool yihiin, ay ku dhisan yihiin nadhaam ku salaysan Federaalism. Nadhaamkaasoo ogol in qofkasta oo American, Canadian ama German ahi ku noolaan karo meeshuu doono.
Inkastoo aan la beenin karin in nadhaamka Federaaliga ahi rabitaankiisu uu ka danbeeyo aragtida dadka uu sida gaarka ah uwaxyeeleeyey, qasaaro naf iyo maal lehna uu ka soo gaaray dagaalkii sokeeye ee bilowday dabayaaqadii 1990kii.
Marka aan usoo noqdo qoraalkayga oo ku saabsaabsan guushii taariikhiga ahayd oo ay cayaaryahanadii Magaalada Garoowe, ee Dowlad Goboleedka Pubtland ka gaareen ciyaartii Kubada Gacanta ee Magaalooyinka Bariga iyo Bartamaha Africa, taas oo ay sabab utahay ismaamulka gaarka ah oo ay dadka reer Puntland heleen ka dhib markii ay burburtay Dowladii Dhexe ee wadanka ka talin jirtey oo wax kasta kusoo koobtey Gobolada waaweyn, una badan dhinaca koonfurta. Sidoo kale, waxaa tartankaas ka soo qaybgalay magaalada Hargaysa oo iyada leh maamul ugaara, Somaliland, kana shaqeeya horumarinta ciyaaraha Somaliland.
Sida ku cad taariikhda ciyaaraha Soomaaliya, magaalada Garoowe kuma jirin magaalooyinkii safka hore uga jiri jiray ciyaaraha Soomaaliya sida magaaladii aan ku dhashay Mogadisho iyo midii aan ku korey Kismaayo, iyo magaalooyin kale oo iyana ciyaaraha Soomaaliyeed ka dhex muuqday sida Baydhabo, Beletwayne, Marka.
Marka, waxay arintaan ka marqaati kacaysaa in Federaalismku yahay mid si gaara ah dadka udareensiinaaya gudasha waajibaadka ka saaran degaankooda – isla markaana xoojinaaya waajibaadka gaar ahaaneed ee shacabka ama dowladaha hoose ka saaran degaankooda.
Sidoo kale, waxaa adkaan lahayd hadii uu weli jiri lahaa nadhaamkii kudhisnaa Dowlada Dhexe in horumarka noocaan oo kale ah ay magaalda Garoowe ka gaarto tartan heer sare ah, oo ay ka soo qaybgalayaan wadamo dowladahoodu dhisnaayeen intii ay dadka Soomaaliyeed ku jireen burburkii ka soo gaaray dagaalkii sokeeye. Dhacdadaan taariikhiga ah, ayaa sidoo kale dhiirigalindoonta dadwaynaha Soomaaliyeed in ay ka shaqeeyaan horumarka deegaankooda.
Waxaase wax laga xumaado ah, in qaar ka mida shabakada sida gaarka loo yeehay iyo xataa Radio Muqdisho oo ay guushaan taariikhiga ahi cinwaan ahaan udoorteen erayga “guuldaro” intii ay guusha ay dhalinta ka socotay Magaalada Garoowe ugaareen ummadda Soomaaliyeed ay diirada saari lahaayeen. Waa kan cinwaankii qoraalkii Radio Muqdisho kusoo baxay ee ku saabsanaa ciyaaryahanda Soomaaliyeed, ee magaalada Garoowe “Garowe oo looga adkaaday finalka tartanka Inter-cities “Sawirro””, so qoraalkaas kuma quruxsanayn hadii ay dadwaynaha Soomaaliyeed usoo bandhigi lahaayeen guusha taariikhiga ah oo ay ciyaaryahanada magaaladaasi usoo hoyday ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan maadaama ay guushaasi ahayd mid taariikhi ah, oo aysan Soomaaliya hore u gaarin.
Kismaayodaily On May - 11 - 2014
Jubbaland, Puntland, Somali sport., Somalia, Somaliland